ဒူဘိုင်း UAE တွင်ရောင်းရန်ရှိသောလုပ်ငန်း 2890 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အရေးပေါ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Dubai ရှိ UAE ရှိရောင်းမည့်စီးပွားရေး
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်စီးပွားရေး l ရောင်းရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ဒူဘိုင်း UAE တွင်ရောင်းရန်စီးပွားရေး
Business Finder သည် သင့်လုပ်ငန်းကို အွန်လိုင်းတွင် ရောင်းချရန်၊ သင့်လုပ်ငန်းကို ရောင်းချရန် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသစ်ကို ဝယ်ယူရန် ရှာဖွေနေသည့် အကြိုက်အများဆုံး ပေါ်တယ်လ်ဖြစ်သည်။ သင်သည် မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိပြီး၊ သင့်လုပ်ငန်းကို ရောင်းချရန် စာရင်းပြုစုပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ စစ်မှန်သောကမ်းလှမ်းချက်များကို စတင်ရယူလိုက်ပါ။
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းချခြင်း၊ ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်စီးပွားရေး၊ ရောင်းရန်၊ ရောင်းရန်၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုရောင်းရန်၊
Category ေရြးပါ Category ေရြးပါ ရောင်းရန်ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသွင်းကုန်နှင့်တင်ပို့မှုသဘောတူညီချက်များရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စီးပွားရေးကိုရှာဖွေနေသည်ဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများအခြားဝန်ဆောင်မှုများPRO ဝန်ဆောင်မှုများငှားရမ်းခြင်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို runရောင်းရန်ကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်
Location တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ အာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယားဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုBritish Virgin Islandsဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကိပ်ဗာဒီကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုကိုး [ကီးလင်း] ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂို [DRC]ကွန်ဂို [သမ္မတနိုင်ငံ]ကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာCote d'Ivoireခရိုအေးရှားကျူးဘားဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖော့ကလန်ကျွန်းများ [Islas Malvinas]ဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေgabonဂမ်ဘီယာဂါဇာကမ်းမြှောင်Georgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန်အီရတ်အိုင်ယာလန်လူသား၏ကျွန်းဣသရလေitaliaအီတလီဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကိုဆိုဗိုကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယား [FYROM]ဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesiaမော်လ်ဒိုဗာမိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်မြန်မာ [Burma]နမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယ်သာလန်အန်တီနယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ကိုရီးယားမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပါလက်စတိုင်းနယ်မြေပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ကျွန်းများပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံRéunionရိုမေးနီးယားရုရှားနိုင်ငံရဝမ်ဒါစိန့်ဟယ်လီနာစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကေတာင္ကုိးရီးယားစပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayenဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားထိုင်ဝမ်Tajikistanတန်ဇန်းနီးယားထုိင္းႏုိင္ငံတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluအမေရိကန်ပြင်ပကျွန်းများအမေရိကန် Virgin Islandsယူအေအီးယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းယူအေအီး - အဘူဒါဘီ - Ajman - ဒူဘိုင်း - ဖူဂျီရာ - Ras al khaimah RAK - ရှာဂျာ - Umm Al Quainယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု - Alabama အဘိဓါန် - Anniston - - ချီကာဆော Demopolis - - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - - Phenix စီးတီး - - ရှက်ဖီးလ် - အရီဇိုးနား Avondale မြို့၊ - - ဘီစဘီ Casa Grande - ဘုရင်မင်းမြတ် - - Havasu City ရေကန် - Arkansas ပြည်နယ် - ကယ်လီဖိုးနီးယား - - ကရမေလ - Claremont - Compton - - ကော့စတာ Mesa - Downey - - Sacramento - ကော်လိုရာဒို - ကွန်နက်တီကတ် - ဝဲ - ကိုလံဘီယာခရိုင် - ဖလော်ရီဒါ Belle Glade Boca Raton - - De Land - - ဝိန်း Fort Lauderdale - - ဟောလိဝုဒ် - အိမ်ရာ - - မဲလ်ဘုန်းမြို့ - - မိုင်ယာမီ - ဂျော်ဂျီယာ - - သြဂတ်စ - Bainbridge Blairsville မြို့၊ - - ကာရိုးတန် - Dalton - New Hampshire ပြည်နယ် - - ဘာလင် - Concord - Derry - - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် - ဂျာစီအသစ် - - Asbury ပန်းခြံ - Bloomfield ကလစ်ဖ်တန် - - အဲလစ်ဇဘက် - Long Beach - နယူးမက္ကစီကို - - Belen - - ခလိုဗစ် ဟော့ဘ် - Roswell - - Tucumcari - နယူးယောက် - - ဘင်ဟမ်တန် - - သရဖူပွိုင့် - - Hudson - ဂျွန်စတောင်း - မြောက်ကာရိုလိုင်းနား - Durham - Edenton - Gastonia ရောဂါ - - ဟန်ဒါဆန် Jacksonville မြို့၊ - ဝါရှင်တန် Aberdeen - Anacortes Auburn - Bellevue - Bellingham - Bremertonဥရုဂွေးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်စီးတီးဗင်နီဇွဲလားဗီယက်နမ်Wallis နှင့် Futuna-အနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
မင်းရဲ့ Business ကိုရောင်းဖို့စီစဉ်နေလား။ အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ယခုစာရင်းရေးပါ
Fitness Studio - Dubai တွင်ရောင်းရန် သို့မဟုတ် ငှားရမ်းရန် Gym for UAE استديو/ص...
ဇန်နဝါရီလ 28, 2022
ကျွန်ုပ်သည် ဥရောပတခွင်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အီတလီအမှတ်တံဆိပ်ကို ရောင်းချပါသည်။
UAE Sharjah တွင်ရောင်းရန် BAKERY
ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Dubai UAE တွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။
ဒူဘိုင်း Jabal Ali ကင်းမဲ့ဇုန်
အဘူဒါဘီရှိ အဓိကတည်နေရာတွင် CrossFit Box Gym ရောင်းရန်ရှိသည်။
ဇန်နဝါရီလ 2, 2022
404 Views စာ
ဤသည်မှာ turnkey လုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရန် အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်...
(HCAC) အပိုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် UAE ဒူဘိုင်း
ဇန်နဝါရီလ 27, 2022
Al Nakheel, Ras တွင်ရောင်းရန် HVAC အပိုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်
အယ်လ် Muteena, Deira, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
86 Views စာ
Karama Dubai တွင်အဝတ်လျှော်ရောင်းချရန်
စက်ယန္တရားအပြည့်ဖြင့် အရောင်းသွက်သော အဝတ်လျှော်စက်...
အယ်လ်ကာရာမာ၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
Shai Appa ပါ
ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် ကားကုမ္ပဏီတစ်ခု ငှားရမ်းနေထိုင်သည့် အသက် ၁၅ နှစ်...
အာဂျန်၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
125 Views စာ
ဤတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ ဝယ်ယူသူအသစ်မှာ...
237 Views စာ
158 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကို ရောင်းရန်ရှိသည်။
မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် နေ့ထိန်းကျောင်းကို လည်ပတ်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ sma...
Dubai ဒီဇိုင်းခရိုင်၊ Business Bay၊ Dubai၊ UAE
ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းချရန် Active စက်ဘီးဆိုင်
Dubai Silicon Oasis ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
164 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် ထိုင်နိုင်သော ၂၀၀ ဆံ့ စားသောက်ဆိုင်
Naif ရဲစခန်းဘေးတွင်တည်ရှိသော အဓိကနေရာ...
Ayal Nasir, Deira, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
98 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် စက်ချုပ်ခြင်းနှင့်အတူ Readymade Showroom တွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။
အရောင်းပြခန်းအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပြီး သပ်ရပ်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော...
The Gardens၊ Dubai၊ UAE
136 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန် Technical Trading ကုမ္ပဏီ
10 နှစ်အတွေ့အကြုံရှိ Technical Trading Co ...
Al Qusais စက်မှု 5၊ Al Qusais စက်မှုဇုန်၊ Al Qusais၊ Dubai၊ UAE
99 Views စာ
ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းချရန် Active Modern Car Auto အလုပ်ရုံ
အဆင့်မြင့် တပ်ဆင်ထားသော ခေတ်မီ ကားဝပ်ရှော့ ရောင်းမည်...
Dubai Investment Park (DIP)၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
129 Views စာ
ဒီလုပ်ငန်းက အလုပ်ရှာနေသူများအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်...
Al Quoz စက်မှုနယ်မြေ ၁၊ Al Quoz စက်မှုနယ်မြေ၊ Al Quoz၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
81 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းချရန် တက်ကြွသော စားသောက်ဆိုင်
Asian စားသောက်ဆိုင်ရောင်းရန်ရှိသည်။ အပြည့်အဝလည်ပတ်မှုနှင့်အတူ ...
Jumeirah Lake Towers (JLT)၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
အင်စတီကျုသည် Al Qusais 1 တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် com...
Al Qusais စက်မှု 1၊ Al Qusais စက်မှုဇုန်၊ Al Qusais၊ Dubai၊ UAE
130 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန် စားသောက်ဆိုင် သို့မဟုတ် ကော်ဖီဆိုင်
စားသောက်ဆိုင် နှင့် ကော်ဖီဆိုင် အမြန်ရောင်းရန်ရှိသည်။...
Jumeirah Garden City၊ Al Satwa, Dubai, UAE
140 Views စာ
ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင် လိုင်စင်ဖြင့် သားငါးအရောင်းဆိုင် လုပ်ငန်း
စက်ပစ္စည်းများဖြင့် အသားငါး လက်လီအရောင်းဆိုင်...
Al Mankhool, Bur Dubai, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
UAE ဒူဘိုင်းတွင် ဘေးကင်းရေး စစ်ဆေးရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ကုမ္ပဏီကို ရောင်းချရန်
ကောင်းမွန်သော Third Party Safety Inspection & Tra...
UAE ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းရန် အကောင်းဆုံး စားသောက်ဆိုင်
PRIME Location TP N အနီးတွင်ရောင်းရန်အသင့်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်...
Al Nahda (ဒူဘိုင်း)၊ ဒူဘိုင်း၊ UAE
70 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် ပရီမီယံသားရေဖိနပ်လုပ်ငန်းကို ရောင်းချရန်
-Premium Leather Shoes လုပ်ငန်း - websi တွင်ရောင်းချခြင်း...
UAE တွင် ဘဏ်ခွဲ4ခု ရောင်းချရန် စားသောက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီ
စားသောက်ဆိုင်4ဆိုင်ရောင်းရန်ရှိသည်။ အမြတ်အစွန်းအားလုံး။ အိုင်ဒီ...
Al Barsha 3, Al Barsha, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းရန် တည်နေရာအချက်အချာကျသော ကော်ဖီဆိုင်
llc လိုင်စင်ဖြင့် အရောင်းသွက်သော ကော်ဖီဆိုင်...
62 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် တည်ရှိသော ကောင်းမွန်သော Fitness Center ကို ရောင်းရန်ရှိသည်။
ဗဟိုရှိ ပရီမီယံနှင့် သီးသန့်ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာ...
အယ်လ်ဆာဖာ၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
94 Views စာ
ဒူဘိုင်းလှေဆိပ်တွင် ရောင်းချရန် Active Gents Salon
79 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်အကောင်းဆုံးကား Polishing လုပ်ငန်း
Ras Al Khor Industrial 2၊ Ras Al Khor စက်မှုဇုန်၊ Ras Al Khor စက်မှု၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
63 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် ခေါ်ယူရေးနှင့် ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ
JLT တွင် ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုရောင်းရန်ရှိသည်။ ပါမောက္ခ...
66 Views စာ
G+2 bldg စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းကို DM မှ အတည်ပြုပြီး G...
Abu Hail၊ Deira၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
114 Views စာ
ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းချရန် စူပါမားကတ် သို့မဟုတ် ကုန်စုံဆိုင်များ
စူပါမားကတ်နှင့် ကုန်စုံဆိုင်များ ကောင်းစွာလည်ပတ်နေပြီ...
ရှိတ်ဇိုင်ယာလမ်း၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
64 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင် အမြတ်အစွန်းကောင်းသော Look Gym ကို ရောင်းရန်ရှိသည်။
ရေကူးကန် နှင့် SAUNA Gym ဧရိယာ 4...
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းကုမ္ပဏီ
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး LLC ကုမ္ပဏီရောင်းရန်- Th...
Sonapur, Muhaisnah, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
UAE ဒူဘိုင်းတွင် ကော်ဖီဆိုင်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Majan, Al Bara တွင်ရောင်းရန်အောင်မြင်သောအရောင်းဆိုင်။
Mohammed Bin Rashid မြို့၊ ဒူဘိုင်း၊ UAE
ဒူဘိုင်းတွင် စားသောက်ဆိုင်နှင့် မုန့်ဆိုင်ရောင်းရန်ရှိသည်။
စားသောက်ဆိုင် နှင့် မုန့်တိုက် အပြီးအစီး ရောင်းမည်...
Warsan 1, Al Warsan, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
95 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန် Polyclinic ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ
တက်ကြွသော DHA နှင့် ရောင်းရန်ရှိသော polyclinic အသစ်စက်စက်
Al Nahda 2, Al Nahda (ဒူဘိုင်း), ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
399 Views စာ
ရောင်းရန် ဒူဘိုင်းတွင် စာရင်းစစ်လိုင်စင်အသစ်
MOE မှအတည်ပြုထားသော L...
505 Views စာ
Ajman တွင် ရောင်းချရန် အထူးသီးသန့် ကော်ဖီဆိုင်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း။ 2018 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ဖီ...
346 Views စာ
Al nisr plaza အဆောက်အဦး၊ al majaz3၊Sharjah
379 Views စာ
Dubai Marina ရှိ အလှပြင်ဆိုင်
Dubai Marina ရှိ Beauty Salon တွင်ရောင်းရန်ရှိသည်...
348 Views စာ
Sharjah တွင်ရောင်းရန်ရှိသောလူမီနီယံအလုပ်ရုံ ورشة المنيوم للبيع في...
Sajja ဧရိယာ၊ sharjah တွင်ရောင်းရန်ရှိသောလူမီနီယမ်အလုပ်ရုံ
378 Views စာ
Sharjah مطعم كبير ရှိ မြို့လယ်အနီးရှိ စားသောက်ဆိုင်ကြီး
Big Running Restaurant ရောင်းရန်ရှိသည်။ လည်ပတ်မှုအပြည့်...
Al Majaz 2၊ Al Majaz၊ Sharjah၊ UAE
275 Views စာ
UAE Sharjah ماركة با... တွင် ရောင်းချရန် နာမည်ကြီး Bucket Biryani အမှတ်တံဆိပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Sharjah ရှိ နာမည်ကြီး Bucket Biryani Brand တစ်ခုဖြစ်သည်။
Al Mahatah၊ Sharjah၊ UAE
Sharjah صالون رجالي للبيع တွင်ရောင်းရန်ရှိသော အမျိုးသားအလှပြင်ဆိုင်
Sharjah တွင် ထိုင်ခုံ ၃ လုံးပါသော အမျိုးသားအလှပြင်ဆိုင်ရောင်းရန်...
Bu Tina၊ Sharjah၊ UAE
206 Views စာ
အဘူဒါဘီတွင် ရောင်းရန် ပို့ဆောင်ခြင်း استلام للبيع في ابو ظبي...
အိမ်အရောက် စက်ဘီးလစဉ် ငှားခ တစ်လ ၅၀၀၀...
အယ်လ်နာဟိုင်ယန်၊ အဘူဒါဘီ၊ ယူအေအီး
195 Views စာ
Abu Dhabi مطعم للبيع တွင်ရောင်းရန်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်
Alkabab AlAzerbaijani သည် အထက်တန်းစားနေရာရှိ အယ်လ်ကာဘတ်
155 Views စာ
Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ရှိသော BBQ စားသောက်ဆိုင် مطعم باربيكيو للبيع ف...
Hadbat Al Zaafran၊ Abu Dhabi၊ UAE
190 Views စာ
مغسلة جديدة للبيع အဘူဒါဘီတွင်ရောင်းရန်ရှိသောအ၀တ်လျှော်အသစ်
ME-10၊ Mohammed Bin Zayed City၊ Abu Dhabi၊ UAE
178 Views စာ
Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ရှိသော Emirati စားသောက်ဆိုင် مطعم اماراتي للبيع ...
စားသောက်ဆိုင် 100% အသင့်ဖြစ်နေပြီ စားဖိုမှူး3ယောက် နဲ့ တစ်ခန်း...
အယ်လ်မူရူ၊ အဘူဒါဘီ၊ ယူအေအီး
173 Views စာ
Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ရှိသောအ၀တ်လျှော် مغسلة للبيع في ابوظبي
Mohamed Bin Zayed City ရှိ အဝတ်လျှော်ခန်းရောင်းရန်...
ဇုန် 17၊ Mohammed Bin Zayed City၊ Abu Dhabi၊ UAE
شاحنة الغذاء အဘူဒါဘီတွင်ရောင်းရန်ရှိသောအစားအစာထရပ်ကား
7.5 မီတာ * 2.5 မီတာ အစားအသောက်ကုန်တင်ကား မသုံးဖူးပါ chi...
Al Shamkha South၊ Abu Dhabi၊ UAE
159 Views စာ
UAE Abu Dhabi တွင် ထူးထူးခြားခြား အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း အလှပြင်ဆလွန်းကား ရောင်းရန်ရှိသည်။
The Saloon သည် သုံးထပ် ရှိသော ဗီလာတွင် တည်ရှိသည်...
Baniyas, Abu Dhabi, ယူအေအီး
179 Views စာ
شركة صيانة المباني အဆောက်အဦ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကုမ္ပဏီ...
ကောင်းစွာ တည်ထောင်ထားသော အဆောက်အဦ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်...
Al Khubeirah၊ Abu Dhabi၊ UAE
177 Views စာ
2013 Toyota Innova 7KV Generator 500 လီတာ အလူမီန...
ဇုန် 12၊ Mohammed Bin Zayed City၊ Abu Dhabi၊ UAE
156 Views စာ
MALL တွင်-- Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်နှင့် ကော်ဖီဆိုင် مطعم وكا...
Al Mushrif၊ Abu Dhabi၊ UAE
154 Views စာ
محل منتجات دواجن الدجاج للبيع في أبو ظبي ကြက်သားကြက်မွေးမြူရေး...
လတ်ဆတ်သော ကြက်သားနှင့် ကြက်ထွက်ပစ္စည်းများ ထားရှိမှုကောင်း...
ME-9၊ Mohammed Bin Zayed City၊ Abu Dhabi၊ UAE
အဘူဒါဘီတွင်ရောင်းရန်ရှိသော စားသောက်ဆိုင် مطعم للبيع في ابو ظبي...
အလှဆင်ထားသော ဆီးရီးယားနှင့် အာရပ်အစားအစာ စားသောက်ဆိုင်...
Al Zaab၊ Abu Dhabi၊ UAE
198 Views စာ
أعمال الكافتيريا الجديدة New Cafeteria Business တွင်ရောင်းရန်ရှိသည်...
ကော်ဖီဆိုင်လုပ်ငန်းအသစ် 10% ရှယ်ယာရောင်းမည် AED 20,0...
Shabiya 12၊ Mohammed Bin Zayed City၊ Abu Dhabi၊ UAE
162 Views စာ
UAE Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန် كافيتريا للبيع ကော်ဖီဆိုင်
ကော်ဖီဆိုင်ရောင်းရန် တည်နေရာ၊Shabiya 9၊...
ICAD - စက်မှုမြို့တော် အဘူဒါဘီ၊ မူဆာဖာ၊ အဘူဒါဘီ၊ ယူအေအီး
163 Views စာ
UAE Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန် Running Restaurant مطعم للبيع في ا...
ချက်ချင်းရောင်းရန် တောင်အိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်။
Al Markaziya၊ Abu Dhabi၊ UAE
UAE Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ရှိသော Well Running စားသောက်ဆိုင် مطعم للبيع...
စားသောက်ဆိုင် ၊ ညစာ ၊ အိမ်အရောက်ပို့ နှင့် မွန်ရောင်းရန်...
Al Mafraq စက်မှုဇုန်၊ အဘူဒါဘီ၊ UAE
157 Views စာ
محل قطع غيار سيارات للبيع ကားအပိုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် A...
ရောင်းဈေး : AED 19,500 တည်နေရာ : Mussafah m11 s...
မူဆာဖာစက်မှုဇုန်၊ မူဆာဖာ၊ အဘူဒါဘီ၊ ယူအေအီး
مطعم للبيع အဘူဒါဘီတွင်ရောင်းရန်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်
mussafah 36 အနီး adnoc ဓာတ်ဆီရောင်းရန် စားသောက်ဆိုင်...
131 Views စာ
Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ရှိသောမိုဘိုင်းကားရေဆေး غسيل سيارات متنقل للبي...
အဘူဒါဘီမြို့စင်တာ၊ အဘူဒါဘီကျွန်း၊ အဘူဒါဘီ၊ ယူအေအီး
121 Views စာ
صالون تجميل للسيدات للبيع في أبوظبي ဂုဏ်သရေရှိအလှပြင်ဆိုင်များအတွက်...
လက်လီအရောင်းဆိုင် အကျယ်အဝန်း 160 စတုရန်းမီတာရှိသော ဂုဏ်ဒြပ်အဆောက်အဦ...
Al Hosn၊ Abu Dhabi၊ UAE
Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ရှိသောပန်းနှင့်ချောကလက်ဆိုင် محل زهور وشو...
အယ်လ်နာဂျဒါလမ်း၊ အဘူဒါဘီ၊ ယူအေအီး
194 Views စာ
Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန်ကောင်းမွန်သောစားသောက်ဆိုင် مطعم جيد التشغ...
100% အောင်မြင်မှုအာမခံချက် Madinat Zayed Wes...
Madinat Zayed အနောက်တိုင်းဒေသ၊ Abu Dhabi၊ UAE
مطعم للبيع في الامارات ابوظبي UAE တွင်ရောင်းရန်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်
စားသောက်ဆိုင်အတွက် Al Markaziya၊ Abu Dhabi၊ UAE
UAE Abu Dhabi တွင်ရောင်းရန် Baqala စီးပွားရေးလုပ်ငန်း بقالة تجارية للبيع...
၆၅ စတုရန်းပေ ကျယ်ဝန်းပြီး အစိုးရမှတ်ပုံတင်နှင့် ဝန်ထမ်း ၄ ဦးအတွက် ခွဲတမ်းအားလုံး
အဘူဒါဘီစက်မှုမြို့တော်၊ မူဆာဖာ၊ အဘူဒါဘီ၊ ယူအေအီး
168 Views စာ
DHA လိုင်စင်အသစ်ဖြင့် လည်ပတ်နေသော အလှပြင်ဆေးခန်း...
Al Safa 1, Al Safa, Dubai, ယူအေအီး
307 Views စာ
صالون للسيدات للبيع في الامارات UAE တွင်ရောင်းရန်ရှိသော အမျိုးသမီးအလှပြင်ဆိုင်...
ပိုင်ရှင်ထံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု အရေးပေါ်။ ကောင်းကောင်းပြေးနေတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးလေးများ...
ဒူဘိုင်း၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
283 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန် အရေးပေါ်အ၀တ်လျှော်လုပ်ငန်း أعمال الغسيل العاج...
Laundry Business for Sale : ငှားရန် : ညနေ 4,000 (48,000/...
301 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင် လက်ဖက်ခြောက်ရောင်းမည် بقعة الشاي التجارية للبي...
ဒူဘိုင်းမှာ ကွဲပြားတဲ့ နေရာ ၄ ခု ရှိတယ်...
Al Qusais 2, Al Qusais လူနေထိုင်ရာ,ရိယာ, Al Qusais, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
Hillo Mur ကုန်စုံ
287 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းရန်ရှိသော ကုန်စုံဆိုင် بقالة ويل رنج للبيع...
Abu Hail တွင်ရောင်းရန်ရှိသောကုန်စုံလုပ်ငန်းသည်အလုပ်များသော...
Hor Al Anz အရှေ့၊ Hor Al Anz၊ Deira၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
219 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန် جراج سيارات للبيع အော်တိုဂိုထောင်
278 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ရှိသောပန်းဆိုင် محل زهور للبيع
Flowe shop တည်နေရာကောင်းတွင်ရောင်းရန်ရှိသည်။ ငါတို့လုပ်စရာရှိတယ်...
170 Views စာ
UAE Dubai مغسلة للبيع တွင်ရောင်းရန်ကောင်းမွန်သောအဝတ်လျှော်အဝတ်လျှော်
محل قطع غيار التكييف ဒူဘိုင်းရှိ HVAC အပိုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်...
ဒေါက်တာ CM Moussa
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန် Café စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည် تشغ...
• အပြည့်အဝလည်ပတ်ပြီး လိုင်စင်ရ Café & Restaurant...
199 Views စာ
قهوة كاملة التجهيز للبيع အစုံအလင် တပ်ဆင်ထားသော ကော်ဖီဆိုင် ရောင်းရန်...
အရောင်းဌာနခွဲ : အထူးကော်ဖီ အစုံအလင်...
Jumeirah, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
269 Views စာ
UAE Dubai တွင်ရောင်းရန်ရှိသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ مركز طبي للبيع
139 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ရှိသောအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း تجارة الملابس للبيع...
Duba ရှိ လက်လီစတိုးဆိုင်အတွက် မယုံနိုင်လောက်စရာ အခွင့်အရေးတစ်ခု...
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
188 Views စာ
UAE Dubai ရှိ Running Ladies Beauty Salon ရောင်းရန်ရှိသည် صالون تجمي...
လိုင်စင်သက်တမ်း 17 တွင် ခွင့်ပြုပြီး ရရှိနိုင်ပါသည်...
مطعم سبورتس بار للبيع UAE တွင်ရောင်းရန်ရှိသော အားကစားဘား စားသောက်ဆိုင်...
ကောင်းမွန်သောလူနေတွင်တည်ရှိသော Fantastic Sports Bar & Lounge
ورشة سيارات للبيع UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ရှိသော အော်တိုကားဝပ်ရှော့...
မော်တော်ယာဥ် လည်ပတ်ရောင်းချသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စုစုပေါင်းဧရိယာသည်...
Ras Al Khor, ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး
214 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ရှိသော Luxury Ladies Salon صالون نسائي فاخر ل...
JLT Dubai ရှိ Luxury Ladies Salon ရောင်းရန်ရှိသည်။ ရောင်းသည်...
315 Views စာ
بقالة للبيع ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ကုန်စုံ
MOE Smallaအနောက်ဘက်ရှိ AL BARSHA 1 တွင် ရောင်းရန်ရှိသော ကုန်စုံဆိုင်...
مطعم برايم لوكيشن للبيع ရောင်းရန်ရှိသော Prime Location စားသောက်ဆိုင် i...
ရောင်းရန်ရှိသော စားသောက်ဆိုင် တည်နေရာ - Bur Dubai - A...
Al Souk Al Kabeer၊ Bur Dubai, ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းရန် ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ شركة توصيل
ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ပို့ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီကို စတင်ပြီး လစဉ်ရယူပါ...
بقالة للبيع ယူအေအီး ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းရန် ကုန်စုံဆိုင်
Sharjah kingfaisal လမ်းတွင် ကုန်စုံရောင်းရန်ရှိသည်...
UAE Dubai مطعم للبيع တွင်ရောင်းရန်ရှိသော Well Running စားသောက်ဆိုင်
နာမည်ကြီး အီတလီ အမြန် အစားအစာ အရောင်းဆိုင်...
Dubai Waterfront၊ ဒူဘိုင်း၊ UAE
محل آيس كريم للبيع UAE ဒူဘိုင်းတွင် ရေခဲမုန့်ရောင်းရန်...
ပစ္စည်းအားလုံး အပါအဝင် ICE Cream အရောင်းဆိုင်...
Dubai Creek Golf နှင့် Yacht Club Residences, Al Garhoud, Dubai, UAE
184 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင် ရောင်းရန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၊
141 Views စာ
UAE Dubai တွင်ရောင်းရန်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း محل طباعة للبيع في ا...
အပြည့်အဝလွတ်လပ်သောအဖွဲ့ သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်အခြေခံ Great R...
174 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ရှိသောအလှပြင်ဆိုင် صالون تجميل للبيع
ပရီမီယံတည်နေရာရှိ Beauty Salon.. အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်း...
DIFC၊ ဒူဘိုင်း၊ ယူအေအီး
232 Views စာ
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ရှိသောအ၀တ်လျှော်လုပ်ငန်း أعمال غسيل الملابس للبيع...
10 နှစ် အရွယ် အဝတ်လျှော်စက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ ရောင်းချရခြင်းအကြောင်းအရင်း-...
شركة ترميمات داخلية للبيع في الامارات အတွင်းခန်းပြုပြင်မွမ်းမံရေး တွဲဖက်...
ကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားပြီး အမြတ်အစွန်းများပြီး တံဆိပ်ကောင်း...
Al Quoz 2, Al Quoz, Dubai, ယူအေအီး
285 Views စာ
Good Running Supermarket အစုံအလင် ရောင်းရန်ရှိသည်...
234 Views စာ
UAE ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ကောင်းသောကုန်စုံဆိုင် بقالة الجري للبيع...
Assalam o alaikum ငါက ငါ့ရဲ့ကုန်စုံရောင်းနေတာ...
181 Views စာ
UAE Dubai တွင်ရောင်းရန်ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ شركة اعلان للبيع...
ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ။ အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်...
UAE တွင်ရောင်းရန်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်4ဆိုင်4مطاعم جارية للبيع...
225 Views စာ
UAE Dubai တွင်ရောင်းရန် စားသောက်ဆိုင် مطعم للبيع في الإمارات دبي...
Deira Dub တွင်ရောင်းချရန်အပြေးစားသောက်ဆိုင်တစ်ခု...
Fitness Studio - Gym အတွက်...
အီတလီ အမှတ်တံဆိပ် REGI လေးရောင်းပါတယ်...
ကမ်းလွန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း...
CrossFit Box Gym ရောင်းရန်ရှိသည်...
(HCAC) အပိုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် f...
1411 Views စာ
1308 Views စာ
Premium Supermarket ရောင်းရန်ရှိသည်
1298 Views စာ
1237 Views စာ
1087 Views စာ
ကြော်ငြာ By တည်နေရာများ
(ကြော်ငြာ 1661 ခု)
(ကြော်ငြာ 140 ခု)
(ကြော်ငြာ 52 ခု)
(ကြော်ငြာ 35 ခု)
Business finder UAE သည် လုပ်ငန်းများကို ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းရန် UAE ၏ ထိပ်တန်းပေါ်တယ်ဖြစ်ပြီး၊ ဤနေရာတွင် သင့်လုပ်ငန်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 150,000 ကျော်အား မျှဝေရန်အတွက် ဒူဘိုင်းတွင် သင့်လုပ်ငန်းကို ရောင်းရန်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်၊ Business Finder တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များစာရင်းသွင်းထားသော AED သန်း 500 ကျော်ရှိသည်၊ သင်၊ ရောင်းရန်ကုန်စုံ၊ ရောင်းရန်ကုမ္ပဏီဖြစ်စေ ရောင်းချရန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရှိသော လုပ်ငန်းဖြစ်စေ ရောင်းချနိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကို ရှာဖွေနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Business model သည် ၎င်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော သဘောတူညီချက်ကို ရှာဖွေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအား ပံ့ပိုးကူညီရန်ဖြစ်သည်။
ရောင်းချသူများနှင့် ဝယ်သူများ၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းကို ရောင်းချရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ စီးပွားရေး ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကို အလွယ်တကူ ရောင်းချနိုင်သည်၊ သင်သည် လုပ်ငန်းပြောင်းရန် သို့မဟုတ် အခြားရွေးချယ်စရာကို ရှာဖွေရန် စဉ်းစားနေပါက ၎င်းသည် သင့်လုပ်ငန်းကို စာရင်းပြုစုရန် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စိတ်ပါဝင်စားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို ရောင်းရန် ပို့စ် AD ကိုနှိပ်ရန် လိုအပ်သည်၊ နောက်ထပ်အကူအညီများအတွက် သင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးဝင်သော အစိုးရရုံးလင့်ခ်များ။
ဒူဘိုင်းစီးပွားရေး | ဒူဘိုင်းတရားရုံးများ | စည်ပင်သာယာ | တာရှဲလ် |AMER စင်တာ | မြေယာဌာန | ဒူဘိုင်းအခန်း | GDRFA | နှင့် ICA | MoHRE |
ရောင်းရန် | ကော်ဖီဆိုင်ရောင်းရန် |ကုန်ခြောက်ရောင်းရန် စားသောက်ဆိုင်ရောင်းရန် | အလှပြင်ဆိုင်ရောင်းရန် | အဝတ်လျှော်ရောင်းရန် | ရောင်းရန်ရှိသည် | ရောင်းရန်ကော်ဖီဆိုင် running | စူပါမားကတ်ရောင်းရန် | အဝတ်လျှော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ရောင်းရန်ရှိသည် | ကုန်ခြောက်ရောင်းရန် ဒူဘိုင်းရှိဆေးဆိုင်ရောင်းရန် Bur Dubai တွင်ကော်ဖီဆိုင်ရောင်းရန်ရှိသည် ဒူဘိုင်းတွင်သန့်ရှင်းရေးကုမ္ပဏီရောင်းရန်ရှိသည် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးခန်းရောင်းရန် | အမျိုးသားအလှပြင်ဆိုင်ရောင်းရန် | ကုန်စုံဆိုင်ရောင်းရန် | ကားရေဆေးလုပ်ငန်းရောင်းရန် | ရောင်းရန်အထွေထွေရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင် အရောင်းအ ၀ ယ်လိုင်စင် baqala ရောင်းရန် | အမျိုးသမီးအလှပြင်ဆိုင်ရောင်းရန် | ကုန်ခြောက်ရောင်းရန်ရောင်းသည် ဒူရာ၊ deira တွင်ကော်ဖီဆိုင်ရောင်းရန်ရှိသည် ဒူဘိုင်းတွင်မုန့်ဖုတ်ရောင်းသည် ဒူဘိုင်းတွင်ရောင်းရန်ပျိုးခင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အစိုးရရုံးများ လင့်ခ်များ။
မူပိုင်ခွင့် 2017 © BusinessFinder All Rights Reserved ။